2.3 Sandisk CF Card Recovery n
Waxaan ka dhan riyaaqay lahaanshaha kaarka micro SD loogu isticmaalo telefoonada naga, kaamirooyinka iyo kuwo kale laakiin wax noqon dhanaan markasta in SD micro heel waxyeelloobo. Waa maxay saamaynta ay ku leedahay? Waxaad lumin sawir in uu jecel yahay, dokumenti muhiim ah ama wax kasta oo aad dhab ahaan u baahan yahay. Taasu waa mid aan lahayn jecel wax laga badiyay in sababta hubaal wax fa fursad SD micro waxyeelo tijaabin doonaa dareemayaasha. Sidaas, waa maxay sababaha keena ah SD micro musuqmaasuq?
Sababaha Musuqmaasuqa SD micro
Musuqmaasuqa kaararka SD micro dhici kara iyada oo loo marayo qaabka hooseeya ee halka qaar kalena waxaa laga yaabaa gacantaada. Kaarka saaridda inkastoo weli la isticmaalo waa sabab ka mid ah kaarka laga yaabaa in musuqmaasuq. Tusaale ahaan, haddii aad u isticmaalaya in kamarad iyo aad si khaldan u tuurid. Formatting Shil kale oo ay keeni kartaa in ay musuqmaasuqa kaararka SD micro. Qaar ka mid ah kuwa aan aad gacmihiinna ku jiri kara virus computer weerar oo soo saarta cilladaha ka dhasha design si taxadar la'aan iyo isu geynta ee dhamaadka warshadda.
Ka ah kaararka SD micro musuqmaasuq soo kabsado Data isticmaalaya Wondershare Data Recovery Tool
Hadda waxaad ayaa laga badiyay faylasha aad musuqmaasuq SD micro, ma jirto baahi loo qabo in qaylin badan caano daatay. Ka dib oo dhan, waxaa jira xal in dib waxaad heli doontaa marka aad bogsato. Jawaabtu waa aalad kabashada software loo yaqaan Wondershare software kabashada xogta. Tani waa mid ka mid qalab oo dhan ee loogu tala galay inuu ka soo kabsado xogta lumay ka storage devices files halka aad bixiya khibrad user wanaagsan. By waayo-aragnimo user software muhiimad kaa caawinaysaa in aad samayso go'aano sax ah la fududahay in raac tallaabooyinkan. Bal aan eegno sida aad u soo kaban karto, files la isticmaalayo Wondershare Data Recovery Software.
Talaabada 1: Download, rakib iyo abuurtaan Software ka
Tani waa software ah oo loogu talagalay Mac iyo Windows users sidaas haddii aad socda Linux PC ah, waxaa jira fursad ah in aad u baahan doontaa in boot multi inay ku raaxaystaan ​​software ah. Tag download rasmiga site- http://www.wondershare.com/data-recovery-mac/ dooro madal aad ordaya oo download.
software ayaa lagala soo bixi waa version tijaabo ah, laakiin waxaad ka heli kartaa nooca buuxda u qaababka ugu badnaan . Marka lagu rakibay, abuurtaan software iyo aad ku fiican tahay inuu ku soo bilowdo. Hubi in aad korto kaarka micro SD oo isticmaalaya telefoonka ah oo USB, akhristaha kaadhka xusuusta ama doorasho kasta adiga kugu haboon.
Talaabada 2: Qaabka Recovery Dooro iyo Scan
Tallaabada labaad waa in la doorto ikhtiyaarka soo kabashada waa in xulashada Recovery File Lost oo aad sii wadi doonaa in xulashada Jidka meesha kaarka SD micro waxa uu ku yaalaa guji Scan doorasho. Ha scan software ka dhex files aad sida aad sugto
Talaabada 3: Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ogaadaan Faylal ay ceshan
Tallaabada ugu dambeeya waa in ay doortaan files in aad rabto in aad soo kabsado. Xaaladdan oo kale ah in aad jeclaan lahayd inay ka soo kabsadaan oo dhan markaa waa in aad hubiso sanduuqyada ku beegneyd dhammaan faylasha. Button A cagaaran ee soo socota si ay u sanduuqyada muujinaysaa in file waa wanaagsan yahay, waayo, soo kabashada.
Interface user wuxuu kuu ogol yahay in ay ku eegaan files ka hor aad dooranaysaa waa mid aad u wanaagsan gaar ahaan audio iyo video files. Riix Ladnaansho marka aad soo xulay kuwa aad u baahan tahay. Easy sida in aad soo kabsaday files ka ah SD micro musuqmaasuq.
Sida loo Dayactir kaarka Waxyeello micro SD
Aan ka noqon aannu ogaanno sida aad dayactiro kartaa kaarka SD micro dhaawacan. Si aad u hagaajinno card SD micro ah waxyeelo aad u baahan doontaa inaad isticmaasho qalabka waxaa loo yaqaan SD formatter- aad ka soo dejisan kartaa https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/index.html .
Xusuusnow in la doorto OS aad socda ka hor inta aadan sida wanaagsan ee uu u soo bixi kartaa. Marka aad soo bixi oo lagu rakibay waxaad arki doontaa interface soo socda
Tallaabo 1: Ku rakib Software iyo Buur aad Card SD
Talaabooyinka ugu horeeya ee aad u baahan tahay in la sameeyo waa gashato aad Mac ama daaqadaha computer. Waxaad ku soo bixi kartaa ka http://www.wondershare.com/data-recovery oo ku xidh. Burcad codsigaaga ka menu bilowga ee PC ama qeybta codsiyada ee Mac.
Riix Drive in ay doortaan drive ee kaarka micro SD aad rabtid in aad qaab iyo dayactirka. Riix Qaabka iyo suuqa kala socda muuqan doonaa.
In ka NOOCA QAABKA, dooro DEG DEG, FULL (masixi) ama FULL (OverWrite). Hubi in ee SAXAYO TIRADA QAABKA waxaa OFF ka dibna riix OK.
Marka aad la sameeyo, waxaa jira qaar ka mid ah talooyin dhowr ah oo aad haysato taliska si loo yareeyo fursadaha musuqmaasuq card SD micro iyo dhaawac.
Hubi in aad haysato kaarka si fiican si aadan ugu xoodaan
Ha soo bandhigaan kaarka si aad u kul xad dhaaf ah
Qaabka kaarka la software habboon halkii qalab OS
Iska ilaali waxaa maahan halka isticmaalka-ammaan ah had iyo jeer waxa ay ka saarto
Ha isticmaalin SD ah micro on badan oo qalabka
Waxaa ka fogee qalabka virus cudurka
> Resource > Memory Card > Sidee inuu ka soo kabsado xogta iyo kaarka SD micro waxyeelo dayactirka